Waxey geeriyootay 2 saac oo ay Ambulanse sugeysay kadib. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Waxey geeriyootay 2 saac oo ay Ambulanse sugeysay kadib.
Xafiiska gudoomiyaha gobolka Oslo iyo Viken, ayaa kiis baaritaan ah ku furay xarunta dhakhtarka gargaarka deg-dega ah, kadib markii haweenay ay geeriyootay, mudo 2 saac ah oo ay Ambulanse sugeysay kadib.
Haweeneydan oo 50-meeyo jir aheyd ayaa qabtay xanuun horey loo ogaa, waxaana ay xanuunsatay xiliyadii uu aadka u kacsanaa xanuunka Corona-virus. Waxey la xiriirtay telefoonka gargaarka deg-dega ah, iyada oo sheegtay inuu hayo madax xanuun daran, ayna ka cabsi qabto inuu wadnahu istaago, waxeyna dalbatay in si deg-deg ah loogu soo diro baabuurta gargaarka deg-dega ah(Ambulanse).
Baabuurka gargaarka deg-dega ah ayaa 2 saac kasoo daahay haweeneydan oo baahi u qabtay gargaar dhakhtar oo deg-deg ah, waxaana 2 saac kadib markii ay telefoonka dirtay soo gaaray baabuurka Ambulanse-ka oo geeyay isbitaalka Nedre Romerike ee gobolka Viken.
Dhakhaatiirta isbitaalka Nedre Romerike ayaa isla markiiba qiimeeyay xaalada haweeneydan, waxeyna dalbadeen in loo sii gudbiyo isbitaalka weyn ee Oslo. Iyada oo geeriyootay isla marka isbitaalka la keeneyba.
Xafiiska Gudoomiyaha gobolada Oslo iyo Viken ayaa hada baaritaan dacwadeed ku furay xarunt gargaarka deg-dega ah ee Nedre Romerike iyo Xarunta xiriirka gargaarka deg-dega ah ee isbitaalka Oslo. Iyaga oo sheegay inay u muuqato inuu jiro dayac weyn oo loo geystay haweeneydan geeritootay, lagana gaabiyay in loo fidiyo gargaarkii ay u baahnehd, xiligii ay u baahneyd.
Xigasho/kild: Kvinne døde etter å ha ventet på ambulanse i to timer – Fylkesmannen gransker legevakt.
Previous articleDaawo: Qaabka uu u shaqeeyo App-ka Pay-quick: Lacagta xawaalad guriga ka dirso.
Next articleGermany: Soomaali soomaali kale dilay.